Izitshalo: kwehlisa ushukela wegazi ngohlobo 2 sikashukela > Ukwelashwa okuhlukile
Izitshalo ezinciphisa ushukela wegazi ngohlobo 2 sikashukela: amalungiselelo okwelapha namakhambi
Kuze kube manje, izitshalo ezahlukahlukene ezinciphisa ushukela wegazi ziyaziwa. Lokhu kungenxa yokuthi ukwakheka kwazo cishe zonke izitshalo kufaka inani elikhulu kakhulu lezinto ezilandelwayo zomkhondo namavithamini.
Noma yisiphi isiguli esinesifo sikashukela sibhekene nenkinga kashukela omningi. Ngenxa yalokhu, izinqubo ezingenakulungiswa ziqala ukwenzeka emzimbeni ezithinta kabi isimo somuntu sempilo.
Ukususa ngesikhathi zonke izimpawu ezingezinhle, kanye nokwenza impilo ibe ngcono, kunconyelwa ukusebenzisa umuthi okhethekile njalo. Kepha ngaphandle kwabo, iziguli ezixilonga ezihambisana noshukela omningi wegazi njalo zizama ukuthola ezinye izindlela zokwelapha ezisebenzayo.
Uhlu lwezindlela ezingekho emthethweni zokuqeda lesi sifo luhlanganisa:
Ukusetshenziswa kwe-infusions kanye nama-decoctions wezitshalo zokwelapha kanye namalungiselelo.
Ukusetshenziswa kwemikhiqizo ehlukahlukene elungiselelwe kusuka kumikhiqizo etholakalayo.
Ukulandela ukudla okuthile.
Ukwenza konke ukuvivinya umzimba ngokomzimba kudalwe ngudokotela wakho.
Ngokuvamile, inani elikhulu lamathiphu namasu ahlukahlukene osekuyisikhathi eside esetshenziswa yiziguli kungabikwa kulolu hlu. Ake sithi kufakazelwe ukuthi ukusetshenziswa kwamajikijolo athile, isibonelo, ama-lingonberry, ama-blueberries, umlotha wentaba nabanye, kuthinta kahle inqubo yokunciphisa ushukela wegazi, futhi kususe nazo zonke ezinye izimpawu ezihambisana nalesi sifo esiyisisekelo.
Izitshalo ezahlukahlukene ziyaziwa ezibuye zibe nomthelela ekwehliseni ushukela wegazi. Kepha ukuze umphumela olindelekile wenzeke ngokushesha okukhulu, kufanele uqale ucacisele umuthi wokulungiselela umuthi, futhi futhi uqonde ngqo ukuthi uthathwa kanjani.
Yiziphi izitshalo okufanele uzisebenzise?
Imininingwane eminingi iyatholakala ngezakhi zokwelapha zezitshalo ezahlukahlukene. Banciphisa ngempumelelo ushukela wegazi kushukela. Ngaphezu kwalokho, iningi lalezi zitshalo zitholakala kalula. Zikhula ngemibhede emizini yabazimele noma zilula ukuthola ezimfundeni nasemasimini aseduze. Kepha, uma ungafuni ngempela ukuqoqa izinto ezingavuthiwe ngokwakho, ungasebenzisa imifino ethengiswa emakhemisi noma kwezinye izikhungo ezikhethekile.
Kodwa ngaso sonke isikhathi kubalulekile ukukhumbula ukuthi asikho isitshalo esisodwa esinezinto zokuphilisa ngokugcwele ezitholakala ngemithi yendabuko. Kepha noma ucubungula leli qiniso, ukusetshenziswa kwawo kusiza isiguli kuphela.
Kungcono ukusebenzisa ukwelashwa okuyinkimbinkimbi. Isibonelo, kusebenza kakhulu ukulandela kanyekanye zonke izincomo ezinikezwa udokotela osinikezayo. Nobabili ninokuthatha imishanguzo yendabuko futhi usebenzise ezinye izindlela zokwelashwa. Lapho-ke umphumela omuhle uyeza ngokushesha okukhulu.
Uma usebenzisa izitshalo ukwelashwa okuyinkimbinkimbi, ungaletha imiphumela enjalo:
ukuthuthuka komfutho wegazi
inqubo yokugaya ukudla emzimbeni ifakwa ngendlela ejwayelekile
amazinga eglucose aba ejwayelekile emzimbeni womuntu.
Zonke izitshalo zihlukaniswe ngamaqembu amathathu, kunjalo, lokhu kuhlukaniswa kunemibandela, kepha nokho kunikeza ukuqonda okucacile kokuthi ungazikhetha kanjani izithako ezifanele zokulungiselela ukumiliselwa kokulashwa esimweni esithile. Ngakho-ke, kunamaqembu amathathu ayinhloko:
Imifino emisha noma ephekiwe kahle.
Amaqabunga ezihlahla, izihlahlana nezinye izitshalo.
Am Teas, infusions noma decoctions okulungiselelwe ngesisekelo sezithako ezimbili ezingenhla.
Kepha, futhi, ukuze inqubo yokwelashwa isebenza ngempumelelo ngangokunokwenzeka, kufanele kuqondwe ukuthi yisiphi isitshalo esinempahla ethile yokuphulukisa nokuthi siyisebenzisa kanjani ngokufanele.
Yini ongayisebenzisa ukunciphisa ushukela?
Noma yiziphi iziguli ezihlushwa ushukela omningi kufanele zikhumbule njalo ukuthi amazinga kashukela egazi angakhuphuka kakhulu nganoma yisiphi isikhathi futhi anciphe ngokushesha, ikakhulukazi uma usebenzisa kakhulu umthamo womuthi onciphisa ushukela noma uhlanganisa izindlela zokwelapha ngaphandle kokuthembela ngezeluleko odokotela.
Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kubantu abanesifo sikashukela sohlobo 2. Kulokhu, ukungahambisani nezincomo ekwelashweni kungaholela ekutheni inani le-insulin ye-hormone esegazini lizonyuka kakhulu, futhi izinga le-glucose lizokwehla kakhulu.
Ukuze ugweme lokhu, kufanele uqonde ukuthi imuphi umuthi wehlisela ushukela ezingeni elinconywe udokotela.
Ake sithi izakhiwo ezinjalo ezikhula engadini ngayinye zinezakhiwo ezinhle:
Zonke zinezindawo ezinhle kakhulu ze-hypoglycemic. Ngasikhathi sinye, zingasetshenziswa ngokukhululekile kunoma yisiphi isamba, kodwa, iqiniso, kungcono ukungadli ngokweqile. Kubalulekile futhi ukuthi zilungele iziguli ezinanoma iliphi iqembu lesifo sikashukela.
Kepha imvamisa, iziguli zisebenzisa zonke izinhlobo zetiye, i-infusions nezinye iziphuzo, ezilungiselelwe ngesisekelo samakhambi noma amajikijolo ahlukahlukene. Lolu hlu lubandakanya:
I-Dandelion (futhi ungawasebenzisa womabili amaqabunga awo kanye nezimpande).
I-Currant (kulokhu, izindlela zokupheka ziyaziwa futhi ezidinga ukusetshenziswa kwamaqabunga nezithelo).
I-Rosehip kushukela sikashukela nayo inenzuzo.
Okunye ukwelashwa okunjalo kudume kakhulu ngenxa yokuthi indlela yokulungisa imithi ehlukahlukene ilula kakhulu futhi ayidingi ulwazi namakhono akhethekile.
Kwanele ukuthola ukuthi iyiphi ingxenye eyodwa noma esinye isithako esidingekayo, futhi umphumela ongaphumi ekwelashweni ngeke ukugcine ulindile.
Yikuphi izindlela ezikhona?
Abantu bayazi izindlela zokupheka ezahlukahlukene nezimali ezisiza ukwehlisa ushukela wegazi ngempumelelo. Kepha ukuze banikeze umphumela oyifunayo, kufanele utadishe ngokucophelela ukuthi yini efakiwe kuleyo miyalelo nokuthi uwusebenzisa kanjani umkhiqizo owumphumela.
Ngakho-ke, enye yezindlela zokupheka ezisebenza ngempumelelo ezinganciphisa izinga likashukela egazini ibhekwa njengokulandelayo:
Udinga ukuthatha umuthi kamalibhele, amaqabunga ambalwa anele, udinga nombala we-chicory kanye ne-clover. Ama-lingonberry, ifilakisi, ubhontshisi namaqabunga e-peppermint nawo ayadingeka.
Ngemuva kokuba zonke lezi zitshalo zixubile, zidinga ukugcwaliswa ngamanzi abilayo. Kungcono ukusebenzisa isipuni esisodwa kuphela seqoqo lemithi elingenhla.
Udinga ukusebenzisa leli thuluzi ngesilinganiso sengxenye yengilazi nsuku zonke ngaphambi kokudla ngakunye. Isikhathi sokwelashwa kufanele sibe cishe inyanga eyodwa.
Kubalulekile futhi ukuthi le khambi liphuzwe njalo. Kungemva kwenyanga yokwelashwa kuphela lapho udinga ukuthatha ikhefu amasonto ambalwa, lapho-ke futhi ungaphinde uphinde ukwelashwa.
Nakulokhu futhi, kufanele kuphawulwe ukuthi ngesifo esihlotshaniswa noshukela ophakeme njalo kunengozi yokuthi umuntu akhuphuke kakhulu noma futhi awe kakhulu. Kepha kulokho, kwelinye icala, njalo khumbula kahle ukuthi yiziphi izindlela zokuqala usizo okufanele zithathwe. Kungenzeka futhi ukuthi i-glucose ingawa noma iwele ngaphansi kwesilinganiso esisungulwe kahle. Kulokhu, kubalulekile futhi ukuqonda ukuthi yiziphi izindlela eziphuthumayo ezizosiza ukubhekana nalesi simo.
Kufanele ufunde ikakhulukazi lezi zeluleko zalabo abanolunye uhlobo lwesifo sikashukela. Ngaphandle kwalokho, ukwelashwa okungafanele kungaholela ekutheni isiguli siqale isigaba sokuqala sesi sifo, lapho imijovo ye-analogue yokufakelwa ye-insulin yomuntu ingasakwazi ukuhanjiswa.
Yini okufanele uyenze uma isimo siba sibi kakhulu?
Njengoba kushiwo ngenhla, kuba nezimo lapho irejimeni yokwelashwa engalungile iholela eqinisweni lokuthi isimo sesiguli siqala ukuwohloka kakhulu. Noma imbangela yokuwohloka kwaba ukungabikho ngokuphelele kokulashwa.
Uma isiguli sinoshukela wegazi ophansi, amakhambi asekhaya angasetshenziswa. Okungukuthi, lungiselela ithuluzi elikhethekile. Kusebenza kakhulu ukusebenzisa amakhambi e-caskushka noma i-nigella. Isikhathi sokwelashwa okunjalo yinyanga. Ngakho-ke, uma isimo sesiguli siba sibi kakhulu, udinga ukubonana nodokotela ngokuphuthumayo.
Kukhona ezinye izindlela ezilapha ushukela wegazi ophansi. Basikisela ukusetshenziswa kwezimpande ze-dandelion, i-oats, i-gangus namanye amakhambi. Ngaphambi kokuzisebenzisa, udinga ukuzimisa ngokucophelela emoyeni omusha, bese udla isipuni esisodwa somphathi onjalo. Kuvunyelwe ukuwaxuba wonke futhi usebenzise njengeqoqo. Phuza ukudla okunjalo ngetiye elivamile elihlaza.
Kepha kungahle kube nesimo lapho izinga le-glucose egazini likhuphuka kakhulu. Kulokhu, udinga ukusebenzisa ezinye izitshalo. Kungaba ama-oats angama-chicory noma okuhlwanyelayo. Yaziwa ngokusebenza kahle okuphezulu kwemithi yembuzi. Ukwakheka kwalesi sitshalo kunenombolo enkulu kakhulu yama-alkaloid nama-saponins, ngenxa yalokho umphumela wokudla kwawo uhlala uqondile.
Vele, ngaphandle kwawo wonke amakhambi nezinye izitshalo ezichazwe ngenhla, ezinye ziyaziwa, ezidumile nangokuma kwazo okuhle kokuphilisa. Manje emakhemisi bathengisa imali eyenziwe ngomumo engathathwa esimweni esithile. Kodwa kungcono ukuhlala ubonana nodokotela ngaphambi kokuqala ukwelashwa okunjalo. Ungawehlisa kanjani ushukela wegazi isihloko sevidiyo esikulesi sihloko.
Izizathu zokuthi ushukela ukhuphuke kanjengokulandelayo:
Ukuphazamiseka kwesistimu yokugaya ukudla, ikakhulukazi ama-pancreas, ngokwesibonelo, i-pancreatitis, isimila. Kanye nokulimala kumanyikwe kudalwa ukucindezelwa kwemishini.
Isizungu. Uma emndenini othile ehlushwa ushukela omningi, khona-ke kungenzeka ukuthi azuze lesi simo ngefa.
Izimo eziholela ekucindezelekeni okukhulu, ukukhathazeka, ukungazinzi.
Ukubekwa phambili kwamanani amakhulu ama-carbohydrate ekudleni, ikakhulukazi alula agaywayo.
Ukuntuleka kokuzivocavoca umzimba, impilo yokuhlala phansi, kanye nemidlalo ebukhali.
Ukuphazamiseka kwe-Endocrine, lapho izifo ezahlukahlukene zikhula khona, ngokwesibonelo, isifo sikashukela mellitus.
Ukuthatha umuthi onjenge-diuretics, izindlela zokuvimbela inzalo, imishanguzo ehlukahlukene efaka ama-hormone.
Izifo zesibindi, isibonelo, i-oncology, i-cirrhosis.
Isikhathi esithile, ushukela ungakhuphuka kulezi zimo ezilandelayo: Ubuhlungu obukhulu, ukuhlaselwa isithuthwane, i-angina pectoris, ukushaya kwenhliziyo, ukulimala kobuchopho obuhlukumezanayo, ukuhlinzwa kokugaya ukudla.
Ukwanda ushukela kungaba okwesikhashana, kubuyela kokujwayelekile ngemuva kokuqeda imbangela. Uma lesi simo sihlala isikhathi eside, khona-ke udinga ukubonana nodokotela. Ukuthola izinga lakho loshukela, udinga ukuhlolwa njalo.
I-ginseng ebomvu iyithuluzi elihle kakhulu ekwelapheni isifo sikashukela noma esesigabeni sesi-4.
I-ginseng ebomvu isebenza ngempumelelo ephindwe kathathu kune eluhlaza, ngakho-ke, umphumela uphezulu ekwelashweni kwesifo sikashukela, umdlavuza (ngisho nesigaba 4), isimila esingajwayelekile, izifo zenhliziyo, i-asthma ye-bronchial, isibindi, lapho uhlela ubulili bengane - lokhu kungenye yemfihlo yomlingo ye-ginseng, futhi I-ginseng ebomvu idlala indima enkulu kulokhu.
Izindlela ezimbili zokupheka (ukukhetha kuzo) ekwelapheni isifo sikashukela. I-ginseng powder ebomvu (esigabeni ku-ginseng, funda ukuthi ungayithola kanjani i-ginseng ebomvu), izimpande ezichotshoziwe, udinga ukuthatha u-0.25 g izikhathi ezingama-2-3 ngosuku ngamanzi amancane.
Njalo emavikini amathathu, kwenziwa ikhefu elithatha isonto lonke, ngakho-ke ukwamukelwa kuyizinyanga ezingama-2-4. Izimpande zithululelwa ngotshwala abangama-70% ngesilinganiso esingu-1: 10 ngendlela ebhobozekile - okuncono ngcono.
Gcizelela inyanga eyodwa endaweni emnyama, hlunga bese uthelela kwizilazi zeglasi ezimnyama. I-Dose: Amaconsi ayi-10 kuye kwangama-20 isipuni esisodwa samanzi abandayo abilisiwe amahlandla ama-3 ngosuku imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla.
Qala ukuthatha ngamaconsi ayi-10, ukhulisa umthamo nsuku zonke ngethon e-1, ngakho-ke udinga ukufika ku-20. Inkambo yokwelashwa iyizinsuku ezingama-90.
Ezigulini ezinamathumba amlimazayo, okungenani izifundo ezi-2 kufanele zithathwe. Njalo ngezinsuku ezingama-30 zokuthatha i-tincture kufanele uthathe ikhefu lezinsuku eziyi-10.
Inkambo yokwelashwa kwesifo sikashukela.
Isebenza ngempumelelo ikakhulukazi yesifo sikashukela se-chicory vulgaris. Ukwehlisa ushukela wegazi, isitshalo sonke sivame ukusetshenziswa, kepha iningi lezinto ezizuzisayo ezifana ne-insulin yabantu zitholakala ezimpandeni.
I-chicory ifakiwe ekudleni kwesifo sikashukela, futhi futhi singaba indawo ephelele kashukela nesitashi.
Ngaphezu kwalokho, ikhambi elinjalo labantu livimba izinqubo zokuvuvukala emzimbeni wonke.
Ama-decoctions kanye ne-infusions enziwe kusuka ezimpandeni, amaqabunga neziqu nakho kusiza ukuqinisa umzimba.
I-decoction kanye ne-infusion ye-burdock, enokubuyekezwa okuhle, iyasiza kakhulu uma umuntu enesifo sikashukela saluphi uhlobo. Izimpande zesitshalo zinokunambitheka okumnandi, umbala obomvu onsomi ngaphandle.
Vuna izimpande ze-burdock ngenyanga yokuqala yekwindla. Isitshalo esincane kuphela esidinga ukuqoqwa, ngoba ngokuhamba kwesikhathi, ukugcotshwa kwento edingekile ewusizo kancane kancane kuncipha.
Amacembe nezimpande zomile, emva kwalokho kwenziwa umhluzi wokupholisa. Kulokhu, isipuni samaqabunga sithululelwa engilazini yamanzi abilayo. Udinga ukuphuza amakhambi abantu kathathu ngosuku.
1. UChernushka (waseDamaseku nigella) uphatha isifo sikashukela.
Abaphenyi baseMelika kanye nokuhlangenwe nakho okusebenzayo kwabaphilisi kuqinisekisile ikhono le-nigella lokwehlisa ushukela wegazi ngempumelelo futhi baqinise nokuzivikela okungcono. 1 tbsp. (150-200 ml) nigella, 1 tbsp. izimpande ze-elecampane, inkomishi e-1 ye-oregano, inkomishi e-1 yamapilegranate omisiwe.
Songa yonke into kahle bese uthele endishini. 1 tbsp. Hlanganisa amakhamba wehalananda, bese ugaya kahle fafaza bese uthulula ezingxenyeni ezintathu zokuqala.
Gcina le ngxube embizeni emnyama yesikulu endaweni epholile. Faka isicelo imizuzu eyi-15 ngaphambi kokudla izikhathi ezi-3 ngosuku nge-1 tbsp.
le ngxube amasonto amane alandelanayo, bese kancane kancane unciphisa umthamo. Yenza izifundo ezingama-2-3 zokwelashwa.
Ukuqanjwa kwale ndlela enhle kakhulu kunganciphisa ushukela wegazi kusuka ku-16 mmol kuya ku-5.0 mmol enkambweni eyodwa yokwelashwa.
2. Ezimpandeni kamalibhele, amaqabunga e-cuff, imure enhle namaqabunga kaMay walnut, kuzodingeka ukulungiselela itiye kanye nama-decoctions. Kuyelulekwa ukusebenzisa itiye elinjalo ngokuhlangana nengxube eyomile, okubandakanya i-chernushka engenhla, ngoba umphumela wokwelapha utholakala ngokushesha ku-tata.
Iresiphi ukumnika amaqabunga emayonnaise: amaqabunga omisiwe oqoshiwe, 1 tbsp. amaqabunga asikiwe athululela inkomishi e-1 yamanzi afudumele bese ubilisa imizuzu eyi-1, bese ugcizelela kuze kube yilapho amanzi esepholile.
Cindezela futhi uphuze lokhu kungeniswa ngokulinganayo usuku lonke. Lokhu kwelashwa kungenziwa unyaka wonke.
Ngaphezu kwesifo sikashukela, leli teyi iphatha kahle i-goiter, i-gland yegland, umfutho wegazi ophakeme, i-atherosulinosis, i-fibroids, ama-cysts, njll.
Iresiphi yetiyemu yemalibhele: 1 tbsp. uthele ama-300 ml amanzi ezimpandeni, ubilise imizuzu emi-5 ekushiseni okuphansi, ugcizelele ihora eli-1, ubunzima bese uphuza izikhathi eziyi-100 g izikhathi ezintathu ngosuku imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla. Kuhle ukuhlanganisa i-decoction yezimpande ze-mulberry nge-tincture yamaqabunga e-myrtle.
Kwenzeka ukuthi isiguli sikashukela sidle okunye ukudla okwenqatshelwe, kepha uma siphuza itiye ku-cuff, ushukela ngeke usalugxuma. Iresiphi yetiye kusuka ku-cuff: i-1 dess.
l phisa amakhambi ngezimbali 300 ml wamanzi abilayo, ulethe ku-thumba.
Bese upholile, nzima, uhlukanise ube izingxenye ezimbili uphuze ngemithamo emibili ehlukanisiwe ngaphambi kokudla. I-cuff iphulukisa ezinye izifo.
Ipholisa konke ukuvuvukala, isimila, i-hernias, ukucindezela izinqubo zokuvutshelwa, kuphumuza izinhlungu enhliziyweni, kuphatha i-rheumatism, i-dropsy nokunye okuningi. Ngendlela, wandisa amabele amantombazane amancane.
Ukwelashwa kwalesi sifo kufanele kube okuphelele, kubandakanya hhayi amakhambi okwelapha kuphela, kodwa nemithi, ukudla.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ngeshwa akunakwenzeka ukuqeda ngokuphelele ushukela, kepha izinga lempilo lesiguli lingathuthukiswa kakhulu.
ubunjalo bemvelo nobungani bemvelo,
umphumela omuhle kuzo zonke izitho nezinhlelo zomzimba,
ukungabikho okusebenzayo kokuphulwa kwemithetho.
Izithako eziningi ezenzelwe isitshalo zifakiwe emithini yesifo sikashukela sendabuko. Kepha kufanele zisetshenziswe kuphela ekunconyelweni udokotela nangaphansi kokulawulwa kwakhe okuqinile.
Cabanga ukuthi imiphi amakhambi esifo sikashukela afanele ukwehlisa amazinga kashukela egazini ngokuqhubekayo.
Amakhambi e-Folk okwehlisa ushukela wegazi
Ngokuvamile, odokotela banesimo esingesihle iqiniso lokuthi iziguli ezinoshukela omningi, futhi ngisho nalabo abatholakala benesifo sikashukela, bathatha noma yiziphi izindlela ezivela esigabeni “somuthi wendabuko” ukunciphisa ukusebenza kwabo.
Okokuqala, ayisebenzi ngaso sonke isikhathi, kanti okwesibili, ukusetshenziswa kwama-decoctions athile kanye ne-infusions kungaholela ekuphenduleni komzimba kanye nokuwohloka kwempilo yonke. Lo mbhalo unikeza ezinye izindlela zokupheka zemithi yesintu, ethi, ngokweziqinisekiso zabaphilisi, ezinegalelo ekwehliseni ushukela wegazi.
Qiniseka ukuthi uthintana nodokotela wakho mayelana nokululekwa kokusebenzisa amakhambi abantu ukwehlisa ushukela wegazi. Kuyadingeka futhi ukuthi uqaphe njalo ubufakazi bakho futhi uvame ukwenza lokho “kuvivinya” ngaphansi kokuqashwa kukachwepheshe (okungenani ngokunokwenzeka uma ukuphoqwa ukuphoqwa amandla ukuthi abize iqembu le-ambulensi ekhaya).
Ukufakwa kwamalembe, iparsley kanye nezimpande zikagalikhi
Ukuze ulungiselele umkhiqizo, lungiselela:
i-zest of ulamula ngenani lama-gramu ayi-100 - kulokhu uzodinga ukucubungula 1 kg yemalimons,
Izimpande ze-parsley enani lamagremu angama-300 - ungasebenzisa amaqabunga alesi sitshalo, kepha akunqweneleki ukwenza okunye,
ugarlic ehlutshiwe ngenani lama-300 amagremu.
Manje sidlula izimpande ze-parsley negalikhi nge-grinder yenyama, engeza i-zest ye-lime kubo bese uhlanganisa konke kahle. Umkhiqizo ophumele ufakwa embizeni yengilazi, uvalwe ngesivimbo bese ubekwa endaweni epholile emnyama izinsuku eziyi-14 - kufanele kufakwe.
Udinga ukuthatha umkhiqizo ophelile 1 ithisipuni kathathu ngosuku imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla.
Sixuba ama-stigmas ommbila, pods obhontshisi, amaqabunga wamahhashi asensimini kanye namaqabunga e-lingonberry ngamanani alinganayo (ungagaya izinto ezingavuthiwe).
Amakhambi asekhaya avela ekudleni okuvamile asiza ukulawula amazinga kashukela. Isibonelo:
Thela okusanhlamvu okugcwele kwe-oat (inkomishi eyi-1/2) ngamanzi abilisiwe (0.6 L). Fudumeza imizuzu embalwa engu-15. Phikelela isigamu sehora, ubunzima. Phuza isigamu sengilazi ngenyanga ngaphambi kokudla izikhathi ezintathu ngosuku.
Gaya i-buckwheat kudaka. Thatha isipuni, uthele hhayi i-kefir ebandayo (200 ml). Phikelela ebusuku. Phuza isiphuzo ngaphambi kokudla kwasekuseni ekuseni.
Gaya imbewu yefilakisi ibe yimpuphu. Thela isipuni nengilazi (200 ml) yamanzi abilisiwe. Faka imizuzu engama-40. Cwilisa isigamu selamula kumhluzi. Govuza, phuza ukumnika, ngaphandle kokuhlunga, ngasikhathi.
Hlanganisa ujusi welayisi elilodwa eliphakathi nendawo neqanda lenkukhu eluhlaza. Phuza esiswini esingenalutho izinsuku ezintathu, zilandelana, ngemuva kokuthatha ikhefu izinsuku eziyishumi. Ukuphinda isifundo ekuwohlokeni kwempilo.
Ubhontshisi wokudonsa (4 tbsp. L.) Thela amalitha ayi-0,5 wamanzi abilayo. Fudumeza imizuzu embalwa engama-20. Faka okungenani ihora, nzima. Thatha izikhathi ezi-3 ngosuku ngaphambi kokudla.
Iqembu lokuqala lemithi yesintu lifaka i-parsley, i-rhubarb, u-anyanisi. Garlic, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, isipinashi, oats, dill. Izitshalo ezinjalo ziphumelela kakhulu ekwehliseni ushukela wegazi ngohlobo 2 sikashukela. Uma uzisebenzisa, izinkomba ze-glucose zizoqala ukuncipha ngokushesha.
Ungazithenga kunoma yisiphi isitolo semifino, ungazikhulisela nasekhishini lasehlobo. Futhi, izitshalo ezinjalo zivikela umzimba ezifweni ezithathelwanayo nangomkhuhlane.
Ngokuhlanganiswa nezidakamizwa ezinciphisa ushukela, amakhambi anoshukela omningi asiza ukusheshisa inqubo yokwenza ngcono lesi simo. Njengoba izitshalo ezingenhla zicebile ngamaminerali kanye namavithamini, ziyasiza ukulondolozwa komzimba.
Izici zezakhamzimba ezilwa nokudla zichazwa yizinto eziqukethwe kuzo, ezinamandla okwehlisa ukugcwala koshukela egazini. Kepha amakhambi aphela ekwelapheni okuyinhloko futhi awakwazi ukuthi athathe indawo ye-insulin.
Amakhambi azosiza ngohlobo olunesifo sikashukela esinobunzima obunobunzima. Sebenzisa izitshalo zokwelapha ngaphansi kokuqondisa udokotela, ikakhulukazi lapho kukhona ukukhulelwa noma izifo ezingamahlalakhona ezingapheli.
Izimali zamakhambi zingabekwa ngudokotela bese zithengwa ekhemisi. Kepha kungenzeka ukuthi ubapheke ngokwakho, ubheka imithetho yokuvunwa.
Kumele kukhunjulwe ukuthi akuzona zonke izitshalo zokwelapha ezihlanganiswa nenye. Ngakho-ke, iqoqo elenziwe ngamakhemisi elithandekayo.
Amakhambi amakhambi anconyelwa kakhulu, ngoba athinta umzimba kakhulu. Inkambo yokwelapha i-herbal ihlala izinyanga ezi-2, ngemuva kwalokho sekwenziwe amakhefu amasonto amabili.
Ekholweni ngayinye udinga ukuthatha ukwakheka okukodwa.
Ukuqoqwa kuhlanganisa izitshalo eziningi ezingalapheki ushukela kuphela, kodwa futhi nenani elikhulu lezinye izindlela ze-pathologies.
Zonke lezi zitshalo zithathwa ezingxenyeni ezilinganayo, zixutshwe, zigovwe. Engilazini yamanzi abilayo, isipuni esincane seqoqo siyakhiwa, sivikelwe imizuzu engama-20 futhi sidakiwe.
Ungafunda kabanzi ngokusetshenziswa kwetiye lezindela lesifo sikashukela lapha.
Ukudla ukwehlisa ushukela wegazi
Gaya izingxenye ezi-5 ze-buckwheat nengxenye eyodwa yama-walnuts ehlutshiwe ku-grinder yekhofi, hlanganisa. Kusihlwa, uthele isipuni esisodwa sale nhlanganisela engilazini bese uthele inkomishi engu-1/4 yobisi omuncu noma i-yogurt eyenziwe ekhaya, ngaphandle kokuvusa.
Ekuseni, yidla le ngxube evuvukayo esiswini esingenalutho nge-apula elilodwa. Ngemuva kwalokho, phakathi nosuku, ezinye izikhathi ezimbili ngaphambi kokudla, yidla isipuni esisodwa sengxube enjalo imizuzu engama-30.
ngaphambi kokudla. Yidla kanjena izinyanga ezintathu.
Lokhu kudla akugcini ngokuqondisa ushukela wegazi, kwenza kube ngokwejwayelekile ukusebenza kwezindlala ze-endocrine, futhi endaweni yokuqala - ama-pancreas, aqala ukuphendula kahle futhi akhiqize ama-hormone akhe.
Lonke ipheshana lokugaya ukudla lisabela kahle kulokhu kudla okunempilo.